Nofoanako ny kaontiko Basecamp androany | Martech Zone
Nofoanako androany ny kaontiko Basecamp
Asabotsy, Aprily 7, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Taloha dia mpankafy ahy aho 37 famantarana. Mino aho fa efa mialoha ny androny amin'ny famolavolana sy ny fahatsoran'ny mpampiasa izy ireo. Ny bokin'izy ireo, Mahazo tena, dia mbola misy fiatraikany amin'ny fomba fampiroboroboako, ny famolavolana sy ny fanamboarako ny zavatra takiana amin'ny vokatra. Mampiasa a Basecamp kaonty ary manara-maso ny sasany amin'ireo tetikasako sy ny mpanjifako any hatramin'ny fahavaratra lasa teo.
Eo am-pamakiana ny 37 famantarana bilaogy tamin'ny herintaona, hitako fa niova be ny feon'ny bilaogy, lasa mpitsara sy manam-petra kokoa fa tsy manadihady sy mandinika. Case in point, ity lahatsoratra ity. 37 ny signal dia manilika tanteraka ny rindranasa an-tserasera / ivelan'ny Internet amin'ny toerany fa ny fifandraisana dia zavatra hananantsika rehetra, na aiza na aiza. Ity ny hevitro izay nosoratako tao amin'ny bilaogy:
Ny fomba fijery izay jerenao dia tena tery tokoa ka gaga tokoa aho satria mpankafy famantarana 37. Mampifangaro ny fampiasa amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet amin'ny Internet Connectivity ianao.
Tsy resaka mifandray izany fa resaka fitantanana loharano. Raha afaka manana rindranasa izay mampiasa ny loharanon'ny laptop amin'ny fomba mahomby toy ny an'ny mpizara iray aho, ary koa amin'ny fandanjana ny fampiasana ny bandwidth eo anelanelan'ny roa, dia afaka mamorona traikefa mahafinaritra ho an'ny mpampiasa rehetra.
Nanampy fanamarihana ihany koa aho fa tsy tena ilaina ny fampiasana ny baomba. Tamin'ny fitsapan-kevitra nataoko tao amin'ny bilaogiko, manodidina ny 40% ny valiny no nilaza fa tsy tian'izy ireo ny fampiasana cussing amin'ny tranonkala. Tamin'ny lahatsoratra maro dia hitako tamin'ny fomba mahatsikaiky izy io… fa tao amin'ny bilaogy famantarana 37 no nifanehinana… ho ahy, ny mpamaky izay mety tsy mifanaraka amin'izy ireo. Tsy fanajana izany. Aza diso hevitra aho, misafidy aho (be loatra). Saingy tsy ataoko ao amin'ny bilaogiko izay ezahako hifandray amin'ireo mpamaky ahy toy izay hanilihana azy ireo.
Ny fianianana dia tsy antony hanafoanana ny Basecamp Kaonty anio, na izany aza. Amin'ireo mpampiasa 12 nananako dia izaho irery no tena nampiasa Basecamp. Heveriko fa ny namako iray hafa nanampy zavatra tokana tokony hatao, hafa noho izaho irery no mpampiasa tamin'ny taona lasa (ary nandoa ny kaonty aho). RNH, ny tena fitsapana ny fampiasana ny rindranasa dia ny fampiasan'ny olona na tsia. Tsy nanao izany ny mpanjifako sy ny mpiara-miasa amiko. Raha ny tena izy dia heveriko fa nisoroka ny fampiasana azy ireo izy ireo satria tsy dia hoe mpampiasa izany.
Tsy izany koa anefa no antony nanafoanana ahy. Andro vitsivitsy lasa izay, nampiditra ampahany amin'ny tsy fahalalana ny bilaogin'izy ireo: Tsy mandeha ny olona… mailaka. Angamba tokony niresaka tamin'ny mpanjifa 6,000 izay tompoinay izy ireo izay mahazo fiovam-po tsy mampino sy tsindry Click-through amin'ny mailaka noforonina tsara izay mitaky horonana. Mbola mijanona ny teoria 'Above the fold' - ny fampahalalana hitan'ny mpamaky tamin'ny nanokafany mailaka voalohany no nahasarika azy ireo. TSY midika izany fa tsy mihetsika izy ireo! Ka - raha tsy misy angona hanohanana ny fanambaran'izy ireo mampihomehy dia hino azy ireo izao ny mpamaky ny bilaogy Signals vs. Noise ary hanoratra mailaka tsy misy fampahalalana, ilaina, voalamina tsara, sns… rehetra satria ny bilaogy sasany dia nilaza tamin'izy ireo fa io no famaritana. valiny.
Ny antony hanafoanana ny kaontiko Basecamp dia ny tsy fahatokisako ny Signal 37. Tsy azoko antoka raha avonavona noho ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny orinasan'izy ireo izany, saingy nanjavona ny famirapiratan'izy ireo. Mbola mpankafy ny sasany amin'ireo fampandehanana tsotra ny fampiharana azy ireo aho… fa ny fampiharana amin'ny ankapobeny kosa toa tsy manova ny tontolo iainana tahaka ny nataony taloha. Hahita anao avy eo, 37! Nahafinaritra nandritra ny faharetany.
Mampihomehy, nivadika ho iGTD aho, fampiharana amin'ny birao.
Tags: 37 famantaranaBasecamp
Voavaha ny mistery an'ny Google PageRank
Mendrika handefasana bilaogy ity… Misaotra, Kathy!
Apr 7, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Izaho koa, tompoko, dia tafintohina tamin'ilay paositra 37Signal. Manafintohina ny firenena an-dàlam-pandrosoana koa izany.
Apr 7, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Manaiky aho fa tsy ilaina ny mianiana amin'ny bilaogy, raha tsy afaka mamoaka ny hevitrao ianao raha tsy mianiana, dia tsy izany no teboka matanjaka.
Toa napetraka teo izy io mba hahazoana fanehoan-kevitra, satria hitako fa efa ho 200 ny fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogy 37 signal.
Apr 7, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Stephen - nanaiky. Mikasika ny fianianana, io no ampahany tsy haiko. Miaraka amin'ny talenta kely dia mbola afaka manaitra olona iray ianao, milaza ny marina sy mangarahara, nefa mbola manaja ihany. Tsy azoko hoe inona no tena mahasoa ny bilaogin'ny orinasa.
Namaky tsy tapaka ny bilaogy 37Signals aho, saingy sosotra loatra tamin'io sy ny olona tao aoriany. Ry malala, ary tiako ny fifantohan'izy ireo amin'ny fahatsorana sy ny fifantohana amin'ny mpampiasa. Saingy - nitovy tamin'ny nomarihinao - ny fanamafisana ny bilaogy dia nanjary fanavakavahana sy fanafoanana tanteraka ("marina ny lazaintsika, adala daholo ny hafa"), ary hitako fa manambany sy mahasosotra izany.
IMHO, ireo olona ao ambadiky ny 37Signals dia resin'ny zavatra iray izay toa mahazatra loatra ankehitriny… ny fiheverana fa, satria nahomby ny orinasanay, dia ny fomba fanaovan-javatra no fomba mety ARY ny olona rehetra dia afaka mamerina ny fahombiazantsika amin'ny fahalalana ny fomba fanaontsika.
Hogwash. Betsaka ny olona manaitra sy orinasa mahatalanjona nanaitra noho ny vintan-dratsy na ny fotoana ratsy ary koa ny olona fatra-pitia olona sy maharikoriko nahomby noho ny vintana sy ny fotoana tsara. Betsaka loatra ny olona amin'ny ankapobeny no mihevitra ny fifandraisana sy ny antony tsy misy lozika.
Aleoko ny fomba fanetren-tena kokoa: Ity no nataonay, ity ny orinasanay… raiso izay tianao. Angamba mety handeha tsara ho anao io, angamba safidy mahatsiravina ho an'ny orinasananao… fantatrao tsara.
Hevitra tsara, Adam.
Heveriko fa ny iray amin'ireo lesona amin'ity dia ny hoe ny bilaogy dia mety ho fitahiana na ozona ho an'ny orinasanao. Raha adala ianao… dia mety hampiharihary izany ny bilaoginao. Tsy tian'ny olona ny miasa miaraka amin'ny sotasota. Ny tonon'ny bilaogin'izy ireo dia tena nanidy ahy tamin'ny orinasany iray manontolo.
Ny tena mahaliana dia ny famakiana ny volana farany amin'ny fidirana ary ampitahao amin'ny boky, Get Real. Hafa tanteraka ny tonony amin'ny fanombohany manetry tena.
Apr 7, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Faly aho mahita fa tsy izaho irery no nahita fa ny mpanjifany dia tsy hoe tsy nampiasa Basecamp akory, fa tsy hiditra ao mihitsy.
Apr 8, 2007 amin'ny 6: 26 AM
Tahaka ny namakianao ny saiko, avy eo nosoratanao tamin'ny fomba fohy lavitra noho izay azoko natao.
Izaho koa, tsy nisoratra anarana tamin'ny taona 37, volana vitsivitsy lasa izay, noho izy ireo 'marina ny teninay, diso ny olon-drehetra - jereo, tsy mahafinaritra ve izahay'. Mampalahelo tokoa. Olona manan-talenta tokoa izy ireo.
Apr 8, 2007 amin'ny 8: 48 AM
Mariho ihany koa fa nanonona an'i Mark Hurst / Experience tsara taloha izy ireo, ary mino aho fa efa niresaka tamin'ny Konferansa Gel nataony. Ny newsletter Good Experience dia iray amin'ireo mailaka lava indrindra voaraiko… ary matetika aho no mamaky ny teny rehetra ao aminy.
Apr 8, 2007 amin'ny 10: 54 AM
Hevitra vitsivitsy: miombon-kevitra tanteraka amin'ny fiovan'ny feo aho, ary tezitra amin'izany koa. Azo antoka fa tsy mamaky ny SvN isan'andro amin'ny hafanam-po fanaoko taloha aho. Na izany aza, te-hanolotra hevitra mifanohitra aho:
1. Toa tsy mitovy amin'ny mpanjifa Basecamp lasibatra ianao, indrindra raha afaka manolo ny fiasa misy azy amin'ny rindrambaiko irery ianao. Ary raha tsy miditra ny mpanjifanao dia mety mahazo mameno ny filany PM any an-kafa izy ireo.
2. Re: miteny ratsy, bilaogin'izy ireo. Raha ny fahitako azy dia aleoko manana atiny marina mahitsy toy izay ny banga fotsy mamaky ao amin'ny toerana rehetra.
3. Nihevitra izy ireo fa tsy mazava, mieritreritra aho fa miresaka momba ny mailaka fisoratana anarana / fampidirana fa tsy marketing amin'ny mailaka amin'ny ankapobeny. Aza adino ny iray amin'ny tanjon'izy ireo dia ny hahasoa araka izay azo atao sy hampihenana ny fahasosoran'ny mpampiasa amin'ny fanesorana ireo filàna fanohanana na aiza na aiza ilaina. Raha nandefa an'ity izy ireo, dia mety nahita fangatahana fanohanana marobe avy amin'ny olona tsy namaky feno ny mailaka nalefa tany amin'izy ireo. Tsy azoko antoka hoe inona ny fandrisihana hataon'izy ireo eto. Ary ny valinteninao dia mahataitra ahy ho toy ny «fiarovan-tena * kely ary avy amin'ny POV an'ny mpivarotra mailaka (ahitsio aho raha diso aho).
Apr 8, 2007 amin'ny 11: 33 AM
Salama SirZ! Ny hevitra tsara rehetra, avelao aho hamaly:
1. Angamba. Nandeha tany amin'ny rindrambaiko birao ihany aho mandra-pahitako fitaovana hafa fitantanana tetikasa / fitantanana vokatra. Mino aho fa tsy maintsy misy fampiharana tsara any hizara amin'ny mpanjifa - Matoky aho fa tsy Basecamp ny mitsara ny valin'ny mpanjifako. Ny mailaka no mbola fitaovana voalohany nampitana ny zavatra hatao, ny tanjon'ny tetikasa, ny dokam-barotra, sns.
2. Izaho rehetra dia mangarahara, fa azonao atao ny mamantatra ny hevitrao nefa tsy miteny ratsy. Ny tiako holazaina dia tsy ilaina izany ary dia alaviro ny olona sasany izay mety tia ny vokatrao sy ny orinasanao. Fomba fahalalam-pomba tsotra fotsiny ho fanajana.
3. Tena marina ny anao, ny valinteniko dia miaro amin'ny maha mpivarotra mailaka anao. Ny tontolon'ny IT dia mazàna mizara roa ny fifandraisana amin'ny mailaka amin'ny vondrona roa: ny asa sy ny marketing. Raha ny hevitr'izy ireo dia ny hoe tsy tokony hivezivezy ireo mailaka miasa, dia tokony hanome fototra ho an'izany izy ireo. Ny filazana fotsiny azy dia tsy mahamarina izany.
Miorina amin'ny mpanjifanay dia miseho tsy mitovy amin'ny tena izy ny zava-misy. Tsy manana angon-drakitra henjana hanohanana ny fanoherako aho, fa ny zavatra niainako manokana dia ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny mailaka miasa amin'ny fomba fisoratana anarana dia a tonga lafatra toerana hampiasa HTML adika lava misy pikantsary, famaritana ary fomba fanao famolavolana hafa. Azoko atao ny miady hevitra fa ny mailaka miasa dia toerana tsara kokoa hanaovana scrolling noho ny mailaka marketing satria manantena ny hahazo ilay serasera ny mpisera!
Io koa no fotoana mety indrindra hanararaotana fivarotana sy fivarotana rehetra. Manana mpanjifa efa niasa ianao izay mety mankasitraka vokatra fanampiny na tolotra serivisy mifototra amin'ny atin'ny mailaka alefanao.
Apr 16, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Vahaolana an-tserasera lehibe ahafahanao mampiantrano ny tenanao (na mampiasa ny serivisy fampiantranoana azy ireo) dia ny Copper Project. Izy io dia manana tsiro telo izay lasa lafo kokoa arakaraka ny zavatra ilainao. Hitako fa amin'ny 90% amin'ny tranga misy ahy dia miasa tsara ny dikan-teny Standard.
Nanao ny fitsapana an'i Basecamp aho ary tsoriko fa tsy nahatanteraka ny fampanantenan'izy ireo fa nitaona ahy hino izany rehetra izany. Mbola manana olana amin'ny fampijanonan'izy ireo ny faktiora amin'ny carte de crédit-ko koa aho ary tsy dia manampy be azy ireo hatramin'ny farany.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia tsy ao amin'ny lexicon 37Signals izay hitako fa mampalahelo satria nitaingina PR be sy fankasitrahana ankapobeny izy ireo. Amin'ny famakiana ity bilaogy ity sy ny hafa dia toa nanomboka nanala ny fahitany azy ireo teny an-tsena izy ireo. mampalahelo fotsiny.
Apr 18, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Fanavaozana fotsiny. David Heinemeier Hansson dia namerina tamim-pahalalahana ireo roa volana fiampangana ny carte de crédit nolazaiko ireo. Mieritreritra fotsiny aho fa sarotra lavitra noho ny tokony ho izy ny fizotrany.
Manantena aho fa azon'izy ireo izay solontenany amintsika. 37Ny signal dia tena lasa iray tamin'ireo ankizy / orinasa afisy ho an'ny hetsika web2.0 ary mahamenatra ny mahita fa voaloto ity sary ity.
Ireto misy thesis vitsivitsy avy amin'ny Cluetrain Manifesto izay toa misy ifandraisany manokana…
18 ireo orinasa tsy mahatsapa ny tsenany izao dia tambajotra isan-olona, ​​miha-hendry vokatr'izany ary miditra anaty resaka dia tsy mahita ny fotoana mety indrindra ananany.
21 Ny orinasa dia tokony hanazava sy tsy hihevitra ny tenany ho tsy dia matotra. Mila mahatsapa vazivazy ry zareo.
89 Manana ny tena hery isika ary fantatsika izany. Raha tsy dia hitanao loatra ny hazavana, dia ho tonga ny akanjo hafa izay mailo kokoa, mahaliana kokoa, mahafinaritra kokoa ny milalao.
95 Mifoha isika ary mifamatotra. Izahay mijery. Saingy tsy miandry isika.
… Ary avy any Nordstroms…
Ataovy tsara amin'ny mpanjifa ny raharaha raha tsy eo ianao
Sep 24, 2008 ao amin'ny 1: PM PM
He he… ka, ny fianianana dia marina ary ny tsy fianianana dia tsy marina?
Apr 8, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Izaho dia mpino lehibe 37Signals hatramin'ny bokin'izy ireo ary nihevitra fa tsara ny kabary ifotony tao amin'ny SXSW tamin'ny taon-dasa. Izany dia nilaza fa nieritreritra aho fa izaho irery no nahita an'i Basecamp tsy lavorary loatra. Mbola ampiasaiko isan'andro izany fa manomboka matahotra azy aho fa tsy mahatsiaro ho maivamaivana noho ny nanaparitahako ny fatoran'ny biraoko. Raha ny fandehan'ny feon'ny bilaogin'izy ireo dia tsy afaka milaza tena aho satria mpamaky semi-mahazatra fotsiny aho, saingy tsapako mafy fa na iza na iza manozona amin'ny sehatra "matihanina" dia miezaka mafy milalao ny milay ankizy.
Gaga ny tenako nahita azy ireo nampiasa ny baomba F tao amin'ny lahatsoratr'izy ireo. Araka ny nolazainao tsara, tsy ilaina izany amin'ny fomba madiodio, ary zaza tsy ampy taona fotsiny. Ny singa "cool" amin'ny fanoherana ny fananganana dia nanomboka niha mahia efa ela. Amin'ny zava-poana ihany fa ny bilaogin'izy ireo, araka ny nantitranteran'i SirZ, amin'ny lafiny rehetra, heveriko fa tsy misy milaza fa tsy manan-jo hanao izany izy ireo, nefa tsy mahalasa saina na manao izany Tsy maintsy ekeko manokana izany.
Vazivazy ho ahy ny bokin'izy ireo. Kabary avy amin'ny olona sahisahy noho ny fahasahiany. Mazava ho azy fa ny ankamaroan'ny mpisava lalana amin'ny indostria rehetra dia tsy mihazakazaka amin'ny sehatra mahazatra, fa ny fihetsika f-off dia mampihomehy. Tsia, ny tsotra ho tsotra dia TSY AZO foana ny hevitra tsara.
Izaho koa dia nanjary tototry ny hetahetan'izy ireo ho an'ny Rails, na tsy fisian'izany noho izany. 37 ny signal izay nanambara tamin'ny fotoana maro fa tsy tian'izy ireo ny main-dago na “mahomby loatra” ny Rails, ary lanin'ny mpankafy izany. Azo antoka… amin'ny ambaratonga lehibe izay mety hahafinaritra… fa andao hiresaka pragmatika. Iray amin'ireo fanamby lehibe atrehin'i Ruby ary indrindra ny mpamorona Rails ny fahita firy amin'ireo tontolo iainana vonona hametraka azy ireo. Ruby dia tsy manana ny fahaiza-manaon'ny PHP, na i Python aza. Na dia mety fialam-boly aza ny fampandrosoana dia ataoko indrindra hahazoana vola. Soa ihany aho fa afaka manao izay tiako amin'ny fivelomana, nefa mbola mila mandoa ny faktiora sy manome sakafo ny ankizy. Ny fangatahana ny olona hametraka ny finoana, ezaka ary loharano toy izany, ary avy eo milaza amin'izy ireo fa tsy tianareo hahomby araka izay mety ho izy… ka hampitombo ny tombom-barotra amin'ny fampiasana azy… toa ahy io.
37 ny signal teo aloha lasa voapoizin'i hubris. Gaga aho fa naharitra ela ny olona vao nahita azy. Izy ireo dia milina marketing ho azy ireo manokana.
Zavatra iray hafa tiako horesahina amin'ny SirZ. Na inona na inona fahaizan'i Karr amin'ny maha-mpivarotra mailaka azy dia tsy hanala baraka azy mivantana aho. Fantaro ihany koa fa izany dia mamela azy hanana fahitana sy fahalalana momba ny indostria ary inona no moreso mahomby noho ny hafa, ao anatin'izany ny tenanao, ary mety ho 37 Fambara. Ny hevitra fotsiny dia tsy mampanan-karena anao, ny valiny dia mampidi-bola anao… ary raha mitondra valiny ny fomban'Andriamatoa Karr, iza ianao no hampihena izany?
Manaiky aho fa lasa 'fantaro daholo' ny feon'ny bilaogin'izy ireo ary very io faniriana io mba hilamina tsara. Nahatsapa ihany koa aho fa ny fampidirana ny Highrise izay hyped loatra, ary naoty be loatra ankehitriny fa hitantsika. Mbola manana ny kaontiko Basecamp aho, nefa mijery tsara.
Apr 8, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Zavatra iray tena nahasosotra ahy ny momba ny famantarana 37 dia ny fampielezan-kevitr'ireo mpampiasa Basecamp 1,000,000. Tsy dia marin-toetra fotsiny izy io, satria miabo tsara aho fa ampahatelony izay tsy mpampiasa mavitrika.
Manana kaonty Basecamp 4 farafahakeliny aho, ary ny iray tamin'izy ireo vao nampiasa ny iray volana lasa izay. Toa anao Doug, hitako fa isaky ny tetik'asa dia misy mpampiasa vitsivitsy mbola tsy niditra, na indray mandeha na indroa niditra fotsiny mba hanamarinana izany.
Ary satria tsy misy ny demo mivantana, azoko antoka fa betsaka ny olona misoratra anarana amin'ilay kaonty maimaimpoana mba hijerena fotsiny ilay rindrambaiko, ary farany tsy hampiasa azy io amin'ny zavatra tena izy.
Apr 8, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Tena teboka tena mahaliana izany, mampatsiahy ahy ny fanisana mpamaky gazety;). Gaga marina tokoa aho tamin'ny fihetsika goavambe navoakan'ity lahatsoratra ity! Toa olona vitsivitsy no niandry ny forum hanomezany ny tsy fahafaham-pony.
BTW… olona iray hafa noresahiko dia ianao. 😉
Apr 8, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Hevitra mahaliana. Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Mahaliana foana ny mahita ny fomba fijery hafa (ny ankamaroan'ny zavatra vakin'ny olona momba ny famantarana 37 amin'ny Internet dia fiderana mirehitra).
Nanafoana ny kaontiko Basecamp ihany koa aho tamin'ny farany, saingy misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny zava-misy fa tsy ilay nilaiko fotsiny ilay fiasa.
Mety hahaliana anao ity lahatsoratra ity:
Apr 8, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Nifindra avy tany Basecampe izahay nankany amin'ny TaskFreak maimaim-poana (sy tsotra) tamin'ny herinandro lasa. Tianay izany, ary tsy mijery aoriana.
Apr 9, 2007 amin'ny 4: 03 AM
Mampahatsiahy ahy izany fa mila manafoana ny kaontiko aho. Efa amam-bolana aho no tsy nampiasa azy io ary anisan'ireo zavatra tiako hampiasaina foana izany fa tsy nanao mihitsy.
Jereo ny Basecamp.
Apr 9, 2007 amin'ny 9: 39 AM
Nofoanana koa izy io izao.
Mahalana no nampiasa azy io, ary tsy nanao koa ny mpanjifako (porofon'ireo daty fidirana farany). Niantso azy ireo androany maraina, nanontany raha tokony hotohizako izany. Nahagaga ahy (?) Ny tsirairay tamin'izy ireo (4) nilaza fa TSIA!
PS, ny mailako ho azy ireo:
“Tsy misy ifandraisany amin'ny adihevitra 'f-teny' iray manontolo,
afaka manozona ny tianao rehetra ianao, tahaka izany koa aho…
Ny olana dia hitako fa nanozona aho rehefa nampiasa
ny fitaovanao ary hitako fa tena sarotra ny mahazo / mitazona
ny mpanjifako hampiasa BackPack.
Vao tsy ela akory izay dia very tetik'asa / mpanjifa afovoany aho satria ratsy
fifandraisana (ary BackPack dia nitana andraikitra lehibe tamin'izany).
Resadresaka nifanaovana tsy nampandrenesina androany maraina dia nampiharihary fa nanozona izany koa ny mpanjifako hafa rehetra, ka mora ny fanapahan-kevitra…
FYI, ny sasany amin'ny toetrako / azony:
- Ratsy ny fampidirana amin'ny mailaka sy ny onjan'ny tetikasa 'normal' /
tsy misy (toa ny cc-mail an'ny HighRise mety misy
- Miadana loatra ny tranokala
- Tsy ampy ary tsy dia ilaina loatra ny famoahana rakitra
- Tsy ampidirina tsara ny fitaovana (takelaka fanoratana, 1 taona aty aoriana, mbola "friggin 'meta-refresh" ihany koa, ka bokotra miverina tsotra fotsiny no tsy mandeha)
- Ny Writeboards, ny toerana tiako indrindra amin'ny tranokalanao, dia mijaly amin'ny fitaovam-pandrafetana buggy, tsotra (nilaza tamiko ny mpanjifa iray fa nandany ora maro nanandrana nanao lisitra voakaikitra nopotserina izy)
- Farany nefa azo antoka fa tsy dia kely indrindra, araka ny hitako tato ho ato, RATSINY TSY MAINTSY ny fanondranana data. Miahy momba ny fanondranana XML ny WTF, saingy mbola mila misintona misintona ny rakitra rehetra aho, mitahiry manokana ireo takelaka soritra sns. ”
Nialoha ny fihodinana taloha ianao, saingy fotoana haingana ireny ary mieritreritra aho fa tonga ny fotoana hanaovana famotopotorana marina. ”
Apr 9, 2007 amin'ny 10: 34 AM
Ho an'ny firaketana dia mbola tsy nilaza mihitsy izahay hoe "marina? Diso daholo, ny hafa rehetra" ary tsy mino izahay hoe "marina izahay, diso daholo ny hafa"
Izahay dia mizara tsotra izao izay niasa ho anay. Raha miasa ho anao izy rehetra, tsara. Raha mety aminao ny sasany, tsara. Raha tsy misy mety aminao, tsara. Raiso izay sanda hitanao ary avelao any aoriana ny ambiny.
Azonao atao ny mamerina mijery ity toko ity amin'ny bokinay:
“Be loatra ny fomba fijery mainty sy fotsy.”
Raha toa ny fantatsika hoe fantatry ny rehetra loatra hoe tsy mitovy izany, dia mahazao izahay. Heverinay fa tsara kokoa ny maneho hevitra amin'ny kapoka mafy noho ny maniri-tena momba izany. Raha toa ka mahamenatra na miavonavona izany, dia izany tokoa. Aleonay mihantsy toa ny manondrotra ny zava-drehetra amin'ny “miankina…” Mazava ho azy fa hisy fotoana ilana manitatra na mandika ireo fitsipika ireo. Ary ny sasany amin'ireo tetika ireo dia mety tsy mihatra amin'ny toe-javatra iainanao. Ampiasao ny fahaizanao mandanjalanja sy ny eritreritrao.
Apr 9, 2007 amin'ny 11: 24 AM
Voalohany - misaotra betsaka anao namaly Tsy noeritreretiko mihitsy hoe hanomboka toy ny taloha ity lahatsoratra kely ity. Manantena aho fa afaka mijery any ankoatran'ny fanilihana resahinao ao amin'ny bokinao ianao ary mihaino izay lazain'ny olona vitsivitsy amin'ity lahatsoratra ity.
Koa satria mitanisa ny bokinao ianao, dia hanolotra fanovozan-kevitra vitsivitsy:
1. Toa tsy nanao ianao manakarama ny mpanjifa mety.
2. Ny toetran'ny vokatrao mety misy lesoka mila jerena.
3. Mitaingina ny onja bilaogy manana ny fiakarana SY ny fidinany.
Araka ny nolazaiko tamin'ny lahatsoratro tany am-boalohany - Ny Real Real dia niatrika ny fitsapana ny fotoana ary mbola mpankafy be ihany aho. Tena hanao fanamby amin'ny ekipanao aho handinika ny fomba fijerin'ny bilaoginao. Tena henjana izany ary matoky aho fa azo entina hampiarina hampianatra ny hafa fa tsy hiantsoantso azy ireo.
Apr 9, 2007 amin'ny 11: 19 AM
Ho ahy manokana dia nijanona tsy mpanjifa 37S aho mifototra amin'ny traikefa fanampiana. Rehefa avy nanana olana tamin'ny fananganana tetikasa Basecamp sasantsasany aho dia nanoratra mba hanontany hoe maninona ireo tetik'asa no nasehon'ny tompoko fa tsy izaho. Ny valiny dia liner iray manaraka ny andalana "Hi Todd. Ny tetikasa dia mifandraika amin'ny client satria izy no ifandraisan'ny tetikasa ”na zavatra somary akaiky an'io. Boribory, tsy manampy, ary kilaometatra lavitra ny tena filàna, izay tokony hahalala ny fomba fanovana azy (duh).
Ny fangatahana fanohanana faharoa dia nahazo fitsaboana mitovy amin'izany - haingana, hatramin'ny valinteny izay tsy nanampy na inona na inona, manaraka ny andalana "izany no izy satria izany no izy." Ny valiny iray dia tsy voavaly ny fangatahana fanovana ny rindrambaiko.
Ny halaiko ho ahy dia ny fahatsapana 'raha manana olana amin'ny volavolainay ianao, mankanesa any an-kafa,' na farafaharatsiny mba tsy manoratra azy ireo.
Apr 9, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Douglas, ny bilaoginay dia nitovy nanomboka tamin'ny taona 1999. Ilay bilaoginay dia mitondra ny feo mitovy amin'ny nampiasainay mba hiresahana eo afovoantsika. Izahay dia tsy mamorona olona mitafy fady ho an'ny serasera ampahibemaso. Izahay dia iza isika - na eo amin'ny sehatra na ivelan'ny sehatra. Tsy manao fialantsiny izahay. Tena reharehanay izany. Enga anie mba ho maro ny olona sy orinasa toy izany.
Izahay dia mizara ny hevinay tsy misy sivana. Izay no fomba nataontsika foana ary hanohizantsika hanao zavatra. Mino izahay fa tsara kokoa ny tenanao toy izay olon-kafa - na manao ahoana na manao ahoana toe-javatra. Indraindray isika mianiana. Fifanarahana lehibe. Indraindray ianao dia miantso anay hoe "tsy mahalala." Fifanarahana lehibe. Samy manafintohina ny roa tonta raha mitady fotoana ho tezitra ianao.
Tsy mbola nanandrana nampifaly ny olon-drehetra mihitsy izahay. Fantatsika fa misy olona tsy tia ny fomba firesaka na ny fomba fisainantsika na ny fihetsitsika. Tsara izany. Betsaka ny olona tsy tia anao koa. Tsara izany. Izany no fiainana.
Koa satria manana valiny ho anay ianao dia manana valiny ho anao aho. Hoy ianao: "Roa andro lasa izay, ny bilaogin'izy ireo dia nampiditra ampahany kely amin'ny tsy fahalalana." momba: http://www.37signals.com/svn/posts/357-people-dont-scrollemails
Ny olona miombon-kevitra amintsika amin'ny fanehoan-kevitra koa tsy mahalala? Mahafinaritra anao ve ny miantso ireo olona rehetra ireo ho donto koa? Tsy mahalala ve i Richard Bird? Steven Bao tsy mahalala? Ben Richardson tsy mahalala? Tsy mahalala saina ve i Amie Gillingham? Tsy mahalala ve i Dave Rosen? Tsy mahalala ve i Scott Meade avy amin'ny Concept Share? Anthony Casalena avy amin'ny SquareSpace ihany koa ve tsy mahalala? Josh Williams avy ao amin'ny BlinkSale dia tsy mahalala? Afaka mandefa hevitra ao amin'ny bilaoginao ve ianao na milaza anay fa tsy mahalala ihany koa ireo olona ireo? Sa tsy hijanona ao ambadiky ny teninao ianao? Ny tianao tenenina ve no tianao holazaina?
Tsy mahalala ve i Ryan noho izy nandefa an'ity?
Azonao atao ny mitahiry ny “tsy mahalala” raha mila hevitra izay mendrika azy toy ny fanavakavaham-bolon-koditra, tsy fitovian-kevitra, fankahalana vahiny - fa tsy hevitry ny olona amin'ny halavan'ny mailaka.
Mazava ho azy fa tsy adala ireo olona ireo. Tsy manana ny polipitra mpampijaly izay ananan'ny bilaoginao izy ireo. Maneho hevitra sy manohana tsotra fotsiny izy ireo miankina amin'ny heviny manokana. Tsy adala koa i Ryan. Manome ny heviny koa izy. Manaja izany aho. Ary mazava ho azy, ho an'ny sasany, ny fahitana izany dia zava-misy. Angamba ireo olona ireo dia nanandrana ary nahita fahombiazana tamin'io metodolojia io.
Tsy naseho ho hevitra ny hafatrao, natolotra ho zava-misy izy io. Mino aho fa tsy nisy dikany izany. Ignorant dia faritana ho tsy fahalalana na fampahalalana momba ny lohahevitra na zava-misy manokana. Tsy misy ifandraisany amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra na fanavakavahana sns.
Tsotra tokoa, tena tsy ilaina ny mamaly, Jason. Raha dinihina amin'ny valinteninao dia marina daholo ny fanambarako. Niova ny feo. Ratsy loatra izany. Mirary soa indrindra ho anao sy ny orinasanao.
Heveriko fa tsy olana ny resaka fianianana. Amin'ity tranga ity dia nanampy ny fanamafisana mifanaraka amin'izany. Tsy zaza isika. Miresaka toy izany izahay. Na farafaharatsiny mba ataoko.
Saingy ny bilaogy 37 Signals dia mamely ahy ho mody miseho. Sort of this "hitanay hoe diso daholo ny momba an'io zavatra io".
Apr 9, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Douglas, ianao izao dia toa resy be. Tonga tao amin'ny bilaoginao i Jason mba hamela ny fanehoan-keviny ary miteny azy tsy hamaly ianao? Inona izany karazana fitondran-tena izany?
Tonga amin'ny fanoloranao hevitra ihany koa ianao fa ny asan'i Jason dia voalaza fa tena izy. Hevitra mifototra amin'ny zavatra niainany izany. Ity dia singa op / ed (opinion / editorial). Ny fikarohana siantifika no zava-misy. Heveriko fa tsy hoheverin'i Jason ho siansa, na zava-misy, na zavatra hafa fotsiny ny lahatsorany fa tsy ny heviny miorina amin'ny zavatra niainany fotsiny.
Ary alohan'ny hitsikerana, maninona ianao no tsy manontany azy tsara raha ny heviny na ny zava-misy? Azoko antoka fa ho faly izy hamaly anao. Avy eo ianao dia ho fantatra bebe kokoa momba ny fikasany. Afaka manao vinavina ianao na afaka mahalala ny marina.
Farany, tsy hitako ny fomba hiadian-kevitrao amin'ny lojika fa tsy mahalala olona iray ny olona iray fa ny olona hafa mitovy hevitra aminy kosa tsy. Tsy maninona izay nilaza azy voalohany na hoe aiza no nilazan'izy ireo izany. Manaiky izy rehetra. Manohana ny toeran'i Jason ireo mpaneho hevitra. Ka na mino ianao fa tsy manam-pahalalana daholo izy ireo na tsy misy tsy mahalala. Tsy afaka misafidy serizy ianao rehefa mifanaraka daholo.
Apr 9, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Michael iray hafa,
1. Re: Sore Loser - Sore? Eny. Nanoratra lahatsoratra iray aho mba hitondrako ahiahy sasany amin'ny maha mpanjifa ahy teo aloha ary tonga ao amin'ny bilaogiko ny tompon'ny orinasa ary manary azy ireo. Noroahiny koa ny olona hafa naneho hevitra ratsy. Mampalahelo izany - nanantena bebe kokoa aho. Lozera? Eny. Very fotoana sy vola fampiasam-bola amin'ny fitaovana tsy azoko ampiasaina intsony.
2. Nilaza i Jason fa hevitra izany ary nanaraka fa ny toko 1 amin'ny bokiny dia milaza fa hevitra ny bilaogy. My fomba fijery (izay ny hevitro) tsy mitovy ary nolazaiko izany.
3. Nilaza i Jason fa hevitra no eto, tsy nila nanontany azy aho. Tadidio koa fa ny antony nialako dia tsy ity lahatsoratra ity fotsiny - fivoaran'ny feo sy ny tsy fanajana ny SvN ary koa ny tsy fampiasana ilay rindrambaiko izay mitarika ahy hiala. Tsy hetsika tokana izany fa maro.
4. Re: tsy fahalalana: manohana ny hevitro ianao nefa tsy tsapanao akory. Raha mametraka fanambarana bodofotsy i SvN fa tsy misy olona manorona mailaka, dia afaka mijery izany ho zava-misy ny olona raha izany no aseho azy. Tsy mahalala an'io famelabelarana io ny SvN, tsy izany kosa ireo mpanohana. Mety diso ny fampahalalana azy ireo, saingy tsy adala izy ireo. Izany indrindra no antony nihaikaiko ny teoria an'i SvN - mila tazonina ny bilaogy rehefa aseho ho marina ny 'hevitr'izy ireo'.
ny olona sasany toa tsy mahalala ny momba ny tsy fahalalana.
Misaotra, Lupe. Na dia tsy mijery Wikipedia aza ny valinteniko rehetra dia tiako ilay teny nalaina:
Ny famaritana iray hafa dia milaza fa ny tsy fahalalana no safidy tsy hihetsika na hitondra tena mifanaraka amin'ny fampahalalana sasany mba hifanaraka amin'ny filan'ny tena sy ny zavatra inoany.
Izany, raha ny hevitro, nahoana no tsy nahalala ny lahatsoratra bilaogy Email Scrolling tao amin'ny SvN. Nisafidy ny tsy hanadihady na hanome angon-drakitra marim-pototra hanohanana ny teôria ry zareo. Ary, raha ny tena izy, mifanaraka amin'ny filan'izy ireo hatramin'ny nanoratany ny endrika mailaka vaovao.
Tohanako ny fomba fijerinao… ary ity misy tadbit hafa iray tamin'ny androko tao amin'ny American Express - hizaha toetra ny teôria “ny mpampiasa tsy mandeha”. Manana URL isan-karazany aho izay voahodidin'ny rohy eo an-tampon'ny mailaka ary ireo any ambany, tsara, eny, "ambanin'ny vala." Ary ireo eo amin'ny farany ambany dia voatsindry tahaka ireo teo ambony ihany koa. Miresaka ny kalitao sy ny endrik'ilay atiny izy io. Raha tsy misy ifandraisany ny atiny dia fantatry ny mpampiasa ao amin'ny fisehosehoana voalohany ary noho izany dia mandao izy fa tsy mila mamaky bebe kokoa. Ireo mailako izay mirakitra loharanom-pahalalana, torohevitra ary fomba fanaovana tosika ho an'ny carteurs d'exploitation kely, fa tsy dokam-barotra na dokambarotra, dia nahita vola be (izany hoe hatramin'ny 70%) ny tsindry dia avy amin'ny rohy eo ambanin'ny mailaka.
Izaho koa dia nanandrana ny basecamp ho an'ny tetikasan'ny mpanjifa, ary na dia nandefa antontan-taratasy marobe tany amin'ny trano famakiam-boky / trano firaketana aza aho, dia nanolo ny mpanjifa ho amin'ny antontan-taratasy google ihany. misaotra tamin'ny hevitrao.
Apr 9, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Maninona no miantso olona TSY Mahafantatra momba ny heviny momba ny halavan'ny mailaka? Teny mavesatra be any ho an'ny hevitry ny olona iray. Raha tsy tianao ny hevitry ny olona iray, inona no lanja amin'ny fanoratana lahatsoratra lava momba azy ity ary hisarika ny sainao ho amin'ny fahalalanao hafahafa amin'ny fanondroana ny tsy fahalalan'ny olona? AZA ATAO IZAO.
Ianao dia manao fitsapana goavambe ho an'ny olona iray izay manome teboka iray amin'ny zavatra niainany manokana! Azafady, ho olona lehibe kokoa ianao ary mandrosoa.
Azoko antoka fa efa voavaly ireo fanontaniana ireo.
Apr 9, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Diso saina ve ianareo olona ?! Manome hery be dia be aho amin'ny fitadiavana fomba handanian'ny mpiasako fotoana bebe kokoa amin'ny fandinihana ireo mailaka fa tsy bebe kokoa. Mba hahatongavana amin'ny teboka: ny mailaka dia fanelingelenana tsy voafehy izao. Fa maninona, eto ambonin'ny tany, no misy olona manolotra ny halalin'ny mailaka ho endri-javatra irina?
Ny mpiasa mandany fotoana kely amin'ny mailaka ary ny fotoana bebe kokoa amin'ny telefaona na ny mifanatrika dia mamokatra kokoa, manaiky aho.
Tiako ny manapaka ny habetsaky ny mailaka ananako amin'ny antsasany, fa ny halavan'ny atiny amin'ireo mailaka ireo dia tsy toy ny tapaka sy maina. Heveriko fa misy antony marim-pototra hanana kopia lava vs. kopia fohy. html vs. soratra, sns.
Raha te-hihary fotoana amin'ny famakiana isika dia andao hofoanana ny fifanarahana sy ny jumbo mumbo ara-dalàna hafa. Mandany fotoana betsaka kokoa ny antontan-taratasy ary mandany vola be isan'ora izahay handoavana mpisolovava hamaritana azy!
Misaotra noho ny fijanonana!
Apr 9, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Eny, nanandrana nampiasa basecamp tamin'ny iray amin'ireo tetikasa aho ary tsy nisy ny mpiara-miasa amiko nividy izany. Angamba izany no toetran'ny orinasan'ilay tetik'asa, saingy hitako fa na dia vonona ny hametraka fotoana aza aho hahatakarana ny endrika mampiavaka azy, ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny ekipako dia tsy.
Tena sarotra ny nanova ireo dingana lehibe ary raha misy ny asa miankina amin'izy samy izy, ary tsy nahita zavatra roa ianao dia tsy misy fomba handaminana indray ireo asa sns.
Faly aho fa nampiasa ny kinova maimaim-poana tamin'io ary tsy nanolo-tena tamin'izany tamin'ny fividianana kinova voaloa. Rehefa afaka kelikely, dia izaho irery no nampiasa ny papa fotsy sns, ary nampiasa fiasa hafa amin'ny rafitry ny IM (iray hafa amin'ny vokatra). Ny fanandramana nataonay tamin'ny basecamp ho toy ny fitaovana fitantanana tetikasa quasi dia tsy fahombiazana lehibe. Ny interface dia karazana quirky ary tsy dia mifanaraka (hatramin'ny 8 volana lasa izay - mbola tsy niditra vao haingana aho dia mieritreritra)
Heveriko fa manandrana be ny koolaid-ny azy ireo izy ireo ary tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny lalako na ny làlambe. Ny tiako holazaina dia hoe, raha milaza ianao fa mametraka ny mpanjifanao ho lohalaharana, dia ahoana no fomba hamaivananao azy ireo saika isaky ny fihodinana sy fanaovana paikady momba ny zavatra rehetra toa ny hoe fantatrao ny marina rehetra ary ny hafa rehetra dia fomba fiteny fotsiny. ?
Apr 9, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Ny "baomba-f"? Doka inona ** che.
Matoky aho fa ny 37signals dia mitandrina fa ny turd maso mamiratra ao anaty akanjo dia tsy mitady hilelaka azy intsony.
Aza manahy… Azoko antoka fa hahita bandeagon vaovao ianao hitsambikinana ankehitriny satria tsy lamaody intsony ny marika 37.
Ouch Frank! "Turd manao palitao" - nahatonga ahy hihomehy. Azafady azafady ireo fanovana, mety tsy mankasitraka ny vazivazy ireo mpamaky ahy hafa.
Apr 10, 2007 amin'ny 4: 44 AM
Nampiasa Basecamp tamin'ny mpampiasa roa farany aho. Kritika be aho tamin'io, indrindra satria Jason Fried & co dia be laza ary mazava ho azy fa ny fampiharana azy rehetra dia mitovy amin'ny data munging miaraka amina UI mihemotra somary hafa. Nandritra ny fitarainana momba azy ireo, izaho koa no mpampiasa basecamp lehibe indrindra. Matetika aho no anontaniana hoe "aiza ny antontan-taratasy momba an'io?" ary hamaly aho hoe, “any Basecamp… aiza no misy azy… marina?” Farany ny faharoa dia nanery ahy nanangana wiki teo an-toerana, izay nahazo a betsaka fampiasana bebe kokoa satria toa sarotra kokoa ny mahazo fahalalana ao amin'ny tahiry fampahalalam-baovao misy endrika bilaogy. 🙂
Hatramin'ny nanombohako nivezivezy tena dia mieritreritra foana aho fa tokony handeha haka kaonty basecamp ary apetraka, miandry azy ho ilaina. Tsy mbola nilaina izany… ary izao dia heveriko fa tsy ho izany.
Apr 10, 2007 amin'ny 5: 03 AM
Tsy azoko antoka tanteraka ny momba an'io, fa ny f-teny-fampiasana dia mety ho aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika Snakes on a Plane izay nampiasa io teny manokana io. Indraindray ilay sarimihetsika dia antsoina hoe "Bibilava amin'ny af ****** g fiaramanidina" noho izany.
Tsy mampaninona ahy ny olona manozona amin'ny Internet raha toa ka voafetra sy voafetra izany. Raha tsy izany dia tsy raharahiko izany.
Apr 10, 2007 amin'ny 7: 30 AM
Amin'ny faha-24, ho fampisehoana ho an'ny fianakaviana iray manontolo, dia tsy mahazo manozona. Ny fanehoana fahasosorana tokana azo ekena dia ny "Damn it" - izay nanosika ny mpianatry ny oniversite sasany hanomboka lalao fisotroana tifitra isaky ny mampiasa izany fehezan-teny izany ny Agent Bauer.
Rehefa nahalala an'izany ny mpanoratra dia nanomboka nanome tsipika famelomana izay "damnit damnit damnit" fotsiny izy ireo mba hahitana ireo ankizy nanary tifitra 3 nisesy.
Mba hamerenana fotsiny ny hatsikana vitsivitsy amin'ity resaka ity.
Apr 10, 2007 amin'ny 8: 51 AM
Ny fihetsika nataoko tamin'ny "Get Real" dia mety efa aloha loatra nefa lasa nanjary: ny lohahevitr'io dia ny fahaizany ho 37signals ary hivarotra PDF $ 19 amin'ireo olona lehibe tsy voasasa.
Tazomy amin'ny ORGware ny masonao
ho an'ny fanambaràna, soooon. Io no ho loharano tadiavinao.
Ity ny Birao Mpanolo-tsaina anay.
Apr 10, 2007 amin'ny 9: 09 AM
niaina tamin'ny sabatra izy ireo, ary ankehitriny, tsara… ..
Apr 10, 2007 amin'ny 9: 46 AM
F *** anao Douglas Karr. Tsy mino mandritra ny iray minitra aho fa ilay 'f-bomb', araka ny nilazanao tamim-pitandremana, tsy ny antony nandatsahanao ilay rindrambaiko. Nandany ny ankamaroan'ny lahatsoratra ianao niezaka nandresy lahatra anay fa tsy izy ary tena nahomby tokoa ianao. Heveriko fa na iza na iza lehilahy tsy mahay miteny kely, tsy maninona ny bilaogera 'marketing marketing' masina, dia tokony hampita ny ahiahiny raha misy izany.
Amin'ny maha 'manam-pahaizana momba ny teknolojia marketing' anao dia mpivarotra menaka bibilava tokoa ianao. Raha ny fahitako azy dia tsy maintsy ratsy toetra be ianao amin'izany.
F *** anao Douglas Karr. Tena mandala endrika ihany koa ianao.
Apr 10, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Tena mandala endrika ve aho? Dang, io no sary tsara indrindra ho ahy!
Apr 10, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
… Eny, heveriko fa ny fahaizan'io valinteny io dia miteny ho azy.
Amin'ny maha mpamaky lava ny bilaogin'i Doug ahy dia mila mipaoka aho hilaza fa mbola tsy sendra adala mihitsy izy.
Ie, tsy mbola niditra tamin'ny famantarana 37 aho, saingy tamin'ny fomba mahery setra niarovan-dry zareo dia tsy voatarika amin'ny faniriana hahalala bebe kokoa aho…
Apr 10, 2007 amin'ny 9: 59 AM
@John Beeler: Fantatrao fa mahaliana ity zavatra ity. Manontany tena aho hoe maninona ny fampiharana ny làlambe rehetra dia mitovy amin'ny olana amin'ny fampiasana azy. (Ary ianao dia tokony "handray azy" fotsiny satria i DHH na pontif wannabe hafa no nilaza taminao ..)
@defenders of the cult: SvN sy ny hafa amin'ity corpo-culte ity dia niresaka tamin'ny olona tamin'ny ankapobeny. D.Karr manana teboka? aiza ny data na antontan-kevitra manohana? Ie, hitako ilay teboka hoe ho an'ny EMERISTA REGISTRATION, manampy azy ireo hamintina azy ireo sy amin'ny resaka izany, saingy fantatrao fa ny mailaka fisoratana anarana dia zava-dehibe ihany koa ary manana fahalalàna ampy ny olona hamantatra sy hanao laharam-pahamehana mifototra amin'izany.
Izaho manokana, rehefa mahazo mailaka fisoratana anarana avy amiko aho, dia lazao ny mpamatsy fampiantranoana, ary 3 pejy ny halavany, tsy olana, tsy mila mailaka 4 hafa aho milaza amiko hoe efa napetraka ny kaonty, ny iray kosa milaza amiko fa misy ny iray hafa milaza amiko. aiza no ahitako fanampiana sy serivisy ho an'ny mpanjifa ary misy iray hafa milaza amiko ny url amin'ny webgui hitantana ny kaontiko. Izay fotsiny ilay cruft.
Ny zavatra tsikaritro momba ny 37S dia manitsakitsaka ny lalàn'izy ireo manokana izy ireo ary manenika izany amin'ny alàlan'ny Rails sy SvN ary ireo mpiara-dia aminy rehetra izay tohanany (TextDrive sy Textmate na iza na iza?) Ary manosika nefa tsy manambara ny fifamatorany ara-bola amin'ireo orinasa ireo.
Rails dia milaza ho MAIMA fa vazivazy mampihoron-koditra izany! ny fampiharana rehetra dia mitaky ny kopian'ilay rafitra! tsapanao ve ny vokatr'izany? Topazo maso ireo mpandray anjara amin'ny RailsDay2006. Fandraisana an-jatony roanjato no hanana habaka efa ho 1.5 GB!
Ity no fanitsakitsahana mafy indrindra ny fotokevitra DRY.
Apr 10, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Hitako fa efa be ny fifanakalozan-kevitra eto, saingy nieritreritra aho fa hanampy ny senako roa. Tsy raharahako ny ozona. Tena tiako ilay hevitra. Ny hevitra iray manontolo momba ny teny sasany izay manafintohina kokoa noho ny hafa dia hadalana ihany.
Saingy tsy izany no olana lehibe. Tena hitako ny fahitana azy avy amin'ireo bandy SvN. Raha milaza zavatra ianao dia ambarao amin'ny faharesen-dahatra fa tsy ity s *** nidina rano ity izay toa mahazatra. Raha resy lahatra amin'ny zavatra iray ianao dia teneno izany, ary aza miteny hafa.
Na izany aza, afaka manampy zavatra izay heveriko fa tsy misy amin'ity toe-javatra ity aho. Raha diso ny zavatra nataonao dia ekeo izany ary tohizo. Tsy misy ratsy raha diso. Mety hanindrona kely izy, fa ny mitady izay marina dia mendrika. Raha raisinao ny hevitra hoe 'marina izahay ary izay' dia nandao ny lalan'ny fisainana ianao ary niditra tamin'ny sehatry ny dogma. Tsy milaza aho hoe nanao an'izany ireo bandy SvN. Mazava ho azy fa be hevitra izy ireo amin'ny zavatra ataony, izay mety aminy.
Ny teboka iray hafa izay nolazainao tamin'ny hafatrao tany am-boalohany, izay heveriko fa mendrika ny averimberina dia ny fanaovana fanambarana fa tsy misy data hanohanana azy. Tena zava-dehibe ny fisian'ny angona. Ny fahiratan-tsaina dia sady tsy fahita, ary, araka ny nampianarin'ny traikefa antsika, dia mety ho diso ihany koa indraindray. Ny iray amin'ireo fanontaniana manandanja indrindra azon'ny olona apetraka dia ny: "Eny, misy dikany izany, saingy hita taratra amin'ny zava-misy ve izany (ao ve ny angona)?"
Tsy vitako ny nampiasa ireo olona niara-niasa tamiko hampiasa basecamp, saingy tsy azoko antoka raha toa ka olan'ny Basecamp izany, na ny ankamaroan'ny olona dia tsy zatra / vonona hampiasa rindranasa an-tserasera amin'io fahaiza-manao io. Azo antoka fa mampiasa mailaka sy rindranasa hafa ny olona nefa tsy mieritreritra momba azy akory, fa ny fampiasana azy io dia mitaky fampiofanana tena izy, ary raha tsy mifikitra amin'izany ianao dia toa tsy voajanahary. Miasa amin'ny Oniversite aho ary ny sampam-pianarana / mpiasa eto dia tena solontenan'izany. Tsy zatra manana loharanom-pahalalana azo ampiasaina izao izy ireo, ary tsy handany fotoana hianarana azy ireo marina. Ary imbetsaka izy ireo tsy mila akory.
Apr 11, 2007 amin'ny 9: 19 AM
Nanandrana nivarotra Basecamp tamin'ny mpanjifa iray aho, nifidy ny * fizotran'ny manual * izy ireo aorian'ny fizahana azy.
Apr 11, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Douglas - raha mitady tontolo afaka mailaka tsy misy bokotra, mailaka HTML ianao dia azonao atao ny manamarina ny fitantanana sy ny varotra vokarinay http://LeadsOnRails.com. Na dia tsy rindrambaiko birao aza, dia namboarina hatrany amin'ny valin'ny hevitry ny mpanjifa tena izy mihaino ny mpampiasa toa anao.
Apr 11, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Mihevitra aho fa ny ampahany amin'io miaraka amin'ny faha-37 dia DHH.
Herintaona lasa izay dia nisy lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy manokana (famoidis.com) mametaka programamer izay maniry kokoa hanana asa 9-5 toy izay miditra amin'ny startup ary mampiasa Rails. Io fihetsika tsy fantatra io ihany (raha ny fahitanao ny feo avy amin'ny lahatsoratra an-tranonkala) - raha tsy miombon-kevitra amiko ianao dia adala.
Tsaroako ny nahita an'ity lahatsoratra ity herintaona lasa izay fa tsy ilay volon-koditra taorian'izay. Tamin'izany fotoana izany dia nanana zavatra hafa tao an-tsaiko aho fa rehefa niverina tamin'io aho dia nilaza fa 37 ny fihetsika famantarana dia namela fofona ratsy tao am-bava.
Misy zavatra mifanaraka amin'ny fihetsik'izy ireo. Eny pretentious dia mety ho famaritana tsara. Izaho dia eo am-pamaranana ny mailaka hafahafa tsy manampy sy tsy fantatra avy amin'i Jason ary mpampiasa mahazatra fotsiny aho.
Azo antoka fa eo amin'ny marika ny herin'izy ireo ary miarahaba azy ireo aho noho izany. Fa ny fihetsika toy izao dia manimba azy ireo ary mazava ho azy fa mihoatra ny tsapan'izy ireo na tsy tokony ekena.
Ny toa tsy tsapan'i Matt of 37S dia ny fihetsika / zavatra / zavatra mitondra * midika *. Eny ny fitanisana olona fotsiny dia azo heverina ho fanafihana, fanesoana na zavatra hafa. Miteny hoe "tsy nilaza mihitsy izahay…." tsy ampy tsara. Tena mampidi-doza izy io ary feno rà. Ny fanetren-tena sasany dia mandeha lavitra. Afaka manana izany ianao ary manohy "miavaka".
Raha nitodika tany amin'ny vokariny aho dia najanoko tsara ny fampiasana ny Basecamp satria toa olona maro no hitako fa tsy liana firy ny hafa. Heveriko fa mety ho sakana ny fampisehoana "tsotra". Tsy hitan'ny olona ny heriny na ny antony mahatonga azy io ho tsara kokoa noho ny andian-mailaka. Ary miresaka momba ny olon-tsotra eto aho izay tena handray soa amin'ny famonoana ilay tondra-drano. Vokatra tsara izy io saingy mila famelombelona, ​​izay nolazain'i Jason fa ho valin'ny fiderana mahavariana momba ny Highrise.
Na izany aza manantena aho fa tsy hiala sasatra amin'ny asany intsony izy ireo. Misy faritra mazava vitsivitsy ao Highrise izay ilain'izy ireo resahina ary amin'ny maha mpanjifa mandoa azy - dia hojereko akaiky izy ireo.
May 13, 2007 ao amin'ny 4: 34 PM
Lahatsoratra tsara! Nofoanako koa ny kaontiko basecamp tato ho ato. Aza maika hifamadika amin'ny rindranasa birao na izany aza, misy safidy basecamp tsara azo atao izao: Goplan ary ny OnStage mba hanonona vitsivitsy fotsiny.
Aug 16, 2007 amin'ny 1: 19 AM
Ry SirZ malala, avelao hiatrika izany: tsy te hiresaka momba ilay fitaovana ao amin'ny bilaogin'izy ireo mihitsy izahay raha afa-po tanteraka amin'izany. Nanandrana basecamp aho ary hitako fa diso tanteraka amin'ny tetikasanay. Tsy fitaovana fitantanana tetik'asa rahateo. Zahao ity lahatsoratra ity ao amin'ny PCworld.com. Mieritreritra ny hivadika amin'io aho Wrike fitaovana, toa mahaliana tokoa.
Oct 29, 2007 amin'ny 2: 07 AM
Hehe. Mitory amin'ny amboarampeo. Eny, afa-tsy ny ampahany momba ny naha-mpankafy anao 37Signals voalohany; Tsy izany velively.
Ho an'ireo izay mitady alternatives Basecamp dia nanangona lisitra iray tao amin'ny tranokalan'ny Basecamp bitako eto aho:
Manantena aho fa hanampy ireo mitady vahaolana amin'ny fitantanana tetikasa hafa ankoatra ny Basecamp.
Oct 29, 2007 amin'ny 7: 48 AM
Mampihomehy, mpanjifan'ny orinasa mampiasa Basecamp aho izao. Tsy fantatro hoe efa nilaza aho fa ninono… Nahatsapa aho fa lasa be resaka ity ary tsy dia mifanaraka amin'izany.
Rehefa ampiasaiko izao, ny elanelana lehibe indrindra dia ny fitantanana ny asa sy ny andraikitro. Te-hanao laharam-pahamehana amin'ny lahasa aho, manendry azy ireo, mahazo tombana amin'ny fahavitana (ora sy daty) ary avy eo mahazo status amin'izy ireo (50%, 75%, 100%). Ny endri-javatra ankehitriny dia mamela ny olona hanao laharam-pahamehana sy hanome andraikitra.
Jan 20, 2008 ao amin'ny 12: 40 AM
Nifikitra ela kokoa tamin'izy ireo aho, saingy niaraka tamin'ireto lehilahy ireto ihany. Raha ny marina dia nametraka ny lahatsoratro farany aho teo amin'ny solaitran'izy ireo androany (namboarina etsy ambany):
“Eny, voatery nanafoana ny kaontiko ihany aho tamin'ny farany. Amiko rehefa jerenao ny fiasan'ny HR sy ny fetrany napetrak'izy ireo amin'ny kaonty ambany kokoa, be dia be loatra ny safidy maimaim-poana na ambany ny vidiny eto. Mbola lafo kokoa aza raha te hampiasa azy io amin'ny vokatra 37 hafa toy ny Backpack sy / na Basecamp. Raha tokony haka vokatra iray ary hahatsara kokoa (oh: manampy ny fampiasa HR ho Backpack) dia toa nisafidy làlana iray izay hiafaranao mandoa be dia be izany lasa tsy mahay mifaninana ary zara aza misy fampidirana ireo vokatra. Reraka ihany koa aho tamin'ny "fantatsika ny toe-tsaina tsara indrindra" vs. ny mpanjifa manome sosokevitra. Mahamenatra satria hatramin'ny nahazoana ny Backpack dia nisy olona 37 nampanantena zavatra betsaka ho ahy, saingy indrisy fa efa nihena izany. ”
27 Jan 2008 amin'ny 2:02 PM
Ity lahatsoratra ity dia efa nilalao nandritra ny fotoana fohy fa te-hiditra ao amin'ny 2 cents aho. Miankina tanteraka amin'ny rindrambaiko PM izahay. Misafotofoto izany raha tsy mampiditra ny mpanjifanay sy ny ekipanay izahay. Noho io fiankinan-doha io no ampiasantsika ny Vertabase. Manome serivisy ho an'ny mpanjifa anay izy ireo, mampiofana ary mifantoka aminay - ny fomba tokony hahitana ny vokatra SaaS tsara.
25 Nov 2008 tamin'ny 5:12 PM
FWIW, nifindra avy tany Basecamp nankany SharedPlan izahay. SharedPlan Central dia mifantoka amin'ny lafiny fandrindrana miaraka amin'ny fanohananana fanatanterahana mendrika. Tabilao Gantt, fidirana ivelan'ny Internet miaraka amina fampiharana teratany ho an'ny Mac sy Windows ary hatreto, tsy misy avonavona; ->
26 Feb 2009 tamin'ny 4:35 maraina
Efa ho roa taona aorian'ity lahatsoratra ity dia liana aho ny handre izay ampiasainao amin'ny fitantanana ny tetik'asa sy ny fanarahana ny asa anio.
Mbola afa-po ve ianao (amin'ny fomba fijery vahaolana) amin'ny fanapahan-kevitrao hiala amin'ny Basecamp?
Hitanay ny olona vitsivitsy tonga teny aminay (http://www.smartsheet.com) avy any Basecamp tamin'ny taon-dasa, ny sasany manonona antony mitovy amin'izay navoakanao tany am-boalohany. Ny sasany kosa toa mitady vahaolana an-tserasera izay tsindrio kely fotsiny raha hanovana.
26 Mey 2009 tamin'ny 2:16 hariva
Ho fanontaniana tsy maintsy havaliko tsy ho ela io, Mark. Azoko antoka fa tsy Basecamp ilay izy - mahaliana ahy kokoa ny vahaolana SaaS izay mitondra fiasa mahery vaika sy fampidirina ao amin'ireo fampiharana azy ireo. Amin'izao fotoana izao, tsy mitantana tetik'asa aho - fa tokony hiova tsy ho ela izany.
Mar 2, 2009 amin'ny 11: 22 AM
Zahao hoe http://www.teamworkpm.net - Manana mpanafatra Basecamp izy ireo ary ROCK fotsiny ireto lehilahy ireto! Naka Basecamp izy ireo ary nanampy tamin'ny farany ny zavatra rehetra nangatahinay.
May 11, 2009 ao amin'ny 5: 20 PM
Basecamp amin'ny Steroids, flus 37s 🙂
15 Jun 2010 amin'ny 10:18 AM
Tsapako ny fanaintainanao momba ny fitantanana tetikasa, tiako izy io ary manampy ahy be dia be izany rehefa manao ny fifandanjana amin'ny fampandrosoana ny tranonkala. Joomla dia manana iray tsara izay mandeha eo aorian'ny tranokala ary azo idirana amin'ny alàlan'ny voalohany. Nilaozako ny fametrahana an'ity amin'ny tranokala ho an'ny mpanjifa, toa tsy ampiasain'izy ireo izany. Tena mahafinaritra tokoa ny mitazona ny fananan-tranonkala miaraka!
Hizaha ny iGTD notadiaviko zavatra toy izao ary faly aho amin'ity fitaovana ity
10 Nov 2010 amin'ny 4:23 maraina
Miala tsiny fa eto ny fahasosoranao. Ny rindrambaiko dia mihoatra ny teknolojia… ny olona rehetra dia eo amin'ny tsipika bokotra. Amin'ny maha mpiasa sy mpampiasa ahy dia mamporisika anao aho hijery ny Clarizen, nahazo ny loka 2010 Software Project Management Online.
Rindrambaiko Tetikasa matanjaka misy singa maro toy ny fitantanana fotoana, fitantanana loharano, fitantanana ara-bola ary fampidirana amin'ny SalesForce, Attask, Google….
Mendrika hijerena ..
13 Jan 2011 amin'ny 6:58 PM
Eny, hatramin'ny androany dia niverina tany Basecamp aho! 🙂 Misaotra an'i @howeleadership izay niresaka ahy an'io!
Mar 30, 2011 ao amin'ny 8: PM PM
Doug ve ianao nanandrana ny iray amin'ireo mpifaninana mendrika napetraka etsy ambany alohan'ny niverenanao tany amin'ny basecamp. Izaho manokana dia tena gaga tamin'ny tsy fahampian'ny fandaminana sy ny tsy fisian'ny fihenjanana rehefa nampiditra olona Mac tao Basecamp aho. Tafintohina tamin'ny vahaolana natambatra aho tamin'ny farany. Hantsoiko hoe ecosystem ecosystem izay ahafahan'ny mpiara-miasa, mpanjifa, consultant, mpivarotra, freelancer, mpikambana ao amin'ny birao miditra amin'ny rahona fiaraha-miasa rahona.
Ny vokatra ampiasaiko dia manana singa lehibe momba ny tetik'asa / asa fitantanana, kalandrie fandaharam-potoana, fizotran'ny fizotran'ny asa, fitantanana fifandraisana, forum, chat mivantana, fihaonambe cam cam, fizarana efijery ho toy ny endri-javatra izay azo omena ny mpampiasa sy ny vondrona. mangatsiatsiaka. Andramo a http://www.same-page.com
13 Jan 2011 amin'ny 7:09 PM
FYI - "Nihodina" fotsiny aho. 🙂
25 Mey 2011 tamin'ny 9:49 hariva
Hafatra mahafinaritra! Niezaka nanangona fampahalalana toy izao ho an'ny orinasako aho ary nanoratra tamin'ny bilaogiko manokana ny antony mahatonga antsika hifikitra amin'ny Basecamp. Jereo raha mirona ianao: http://lab.neo-pangea.com/blog/2011/02/basecamp-sucks-less-than-everything-else/
Mar 13, 2011 ao amin'ny 8: PM PM
Izaho manokana dia mampiasa Basecamp satria mora kokoa tamin'ny ekipako ny nandray izany. Heveriko fa ilaina ny fananana rindrambaiko fitantanana tetikasa miorina amin'ny rahona.
Azonao atao ny manamarina ny hevitro ao amin'ny Basecamp, ary ny amin'ny zavatra nihatsara kokoa Fiaraha-miasaPM
May 8, 2011 amin'ny 6: 37 AM
Mampiasa basecamp izahay ao amin'ny Social Media Magic hizara hevitra sy hanarahana ny fifandraisan'ny mpanjifa. Tsy nanana olana tamin'izy ireo izahay. Tsy dia tokony hamaky betsaka ny bilaogin'izy ireo aho, saingy mety ho izany no hevitr'ilay mpanoratra manokana. Tsy avelako hampiala ahy amin'ny fampiharana mahasoa toy izany ny hevitry ny mpanoratra iray. Manao ahoana ny fiasa ho anao? Manantena ny hifanerasera aminao aho amin'ny ho avy!
Jul 20, 2011 amin'ny 8: 27 AM
Betsaka ny fanatsarana azo ampiasaina izay azo atao amin'ny Basecamp. Gaga aho fa tsy misy fikambanana tafatsangana ao anatiny. Ny fomba fiasan'izy io dia tsy misy toerana miharihary izay hiafarany ka ny mpampiasa vaovao tonga amin'ny tetikasa efa napetraka dia tokony hifandray amin'ny olon-kafa hahitana hoe aiza no hahitana zavatra. (Eny, Indraindray ianao dia afaka mahita zavatra amin'ny fikarohana fa tsy matetika.)
Miaraka aminao aho amin'ny fampiasana ny teny 'f'. Na izaho aza avelako hisosa indraindray ny teny cuss tsy misy fialan-tsiny amin'ny tsy fahatratraranao izany rehefa manoratra ianao. Mino aho fa tsy fanajana ireo mpamaky anao izany ary tsy mety amin'ny orinasa mifangaro. Azo antoka fa misy toerana tsy mampitovy ny fomba firesakao rehefa miaraka amin'ireo sakaizanao mamomamo sy izay zarainao imasom-bahoaka ianao.
Aug 19, 2011 amin'ny 12: 03 AM
Whoa! Vao nahita an'ity lahatsoratra ity ary namaky ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra. Panty be dia be ao anaty amboara. Vao avy nanomboka nampiasa Basecamp aho ary misy zavatra kely maromaro izay manadino ahy momba izany. Ny iray amin'izy ireo dia hoe tsy mino aho fa tsy afaka manoratra daty fotsiny, mila mifidy daty avy amin'ny pop-up aho. Marina? Ratsy ve ny ataoko? Ho hitantsika eo ny fandehany.
Sep 1, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
eh, ireo lahatsoratra bilaogy ireo dia avy tamin'ny 2007 toa… izay mitondra ahy amin'ny zavatra tena mahasosotra ahy. Oviana no nosoratana ity lahatsoratra ity? 2007, 2008, omaly? raha tsy misy byline daty ahoana no ahalalako ny fampahalalana novakiako mbola manan-danja ankehitriny.
Azoko antoka fa misy antony marim-pototra tsy mampiditra ny daty amin'ny lahatsoratra iray, fa raha ny fijerin'ny mpampiasa azy dia mitroka izy.
btw, mbola mampiasa basecamp ihany aho - ekeko fa misy fatiantoka io, saingy rehefa ampiasaina amin'ny fampiharana ivelany hafa ianao dia afaka miasa amin'ny ankamaroan'ny olana. Tsy mbola nisy fitarainana avy amin'ny mpanjifa momba ny fampiasana sarotra azy ireo koa. ny 2 cents-ko fotsiny
Sep 2, 2011 amin'ny 12: 48 AM
Taona vitsivitsy lasa izay, David. Mampihomehy… Miverina ao amin'ny Basecamp aho izao. 🙂
29 Nov 2011 tamin'ny 5:55 PM
Mbola mpankafy be 37signals aho, na dia nofoanako ihany koa ny kaontiko Basecamp. Namorona vokatra tsy manam-paharoa sy intuitive… izy ireo tamin'izany fotoana izany. Manantena zavatra bebe kokoa aho izao. Vao haingana aho no nanomboka nampiasa KanbanTool - tiako be ilay interface. Manantena aho indray andro any fa hitantara izany momba an'i Basecamp indray aho.
Apr 19, 2012 amin'ny 3: 45 AM
Nampiasa Basecamp nandritra ny taona maro izahay, saingy vao tsy ela akory izay (herintaona lasa izay) dia nametraka vahaolana vahaolana rindrambaiko iray hafa amin'ny comindware izahay. Fampiasana bebe kokoa, safidy maro hafa ary teknolojia miovaova kokoa ElasticData. Raha mbola tsy nanandrana ianao dia andramo.
Apr 24, 2012 ao amin'ny 3: PM PM
Tiako ny maheno izay hevitrao momba ny basecamp vaovao. Tsy mpankafy aho, fa hitako fa mahaliana ny UI. Thoughts?
Apr 24, 2012 ao amin'ny 4: PM PM
Tsy niova fo aho satria misy fetrany ny fiovam-po. Saingy, amin'ireo horonantsary rehetra hitako dia toa nisy fanatsarana tena tsara sy fanatsarana ny traikefa ho an'ny mpampiasa natao izay hahafinaritra sy mora ny miverina etsy sy eroa eo anelanelan'ny tetikasa.
Apr 12, 2014 amin'ny 9: 08 AM
Salama, New Basecamp dia tsara fa mbola tsy ampy amin'ny endri-javatra maro toy ny tabilao gantt, fiteny, chat inbuilt, fanarahan-potoana, sub task sns.
Apr 14, 2014 ao amin'ny 12: PM PM
Heveriko fa tsy hanampy tabilao gantt izy ireo ary raha milaza ny marina tsy manantena aho. Ampiasainay amin'ny tetikasa madinidinika izy ireo, miaraka amina ekipa kely ary manampy ny tabilao Gantt dia hahatonga anay hiala amin'ny sehatra misy azy ireo amin'ny iray amin'ireo mpifaninana aminy.
Dec 18, 2012 ao amin'ny 4: PM PM
Mahatezitra ahy kokoa ireo olona miteny hoe "mikorontana" fa tsy "manozona." - toa tompona bilaogy iray no nandavaka loto taloha hanaovana tombony.